Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: डाक्टरले भनेको भन्दा धेरै औषधि किन्ने र किनेको भन्दा पनि धेरैको बिल पेस गर्ने सभासद् धेरै !
डाक्टरले भनेको भन्दा धेरै औषधि किन्ने र किनेको भन्दा पनि धेरैको बिल पेस गर्ने सभासद् धेरै !
- खगेन्द्र पन्त
डाक्टरले भनेको भन्दा धेरै औषधि किन्ने र किनेको भन्दा पनि धेरैको बिल पेस गर्ने सभासद् धेरै
कांग्रेस सभासद् कुलबहादुर गुरुङले सबैभन्दा धेरै चार लाख ८१ हजार र माओवादी सभासद् शान्तीदेवी चमारले सबैभन्दा थोरै दुई सय ८५ रुपैयाँ बुझे
पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले दुईपटक गरेर एक हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ बुझेका छन्
तीन वर्षमा सभासद्हरूको औषधि उपचारमा मात्रै संविधानसभा सचिवालयको करिब आधा करोड खर्च भएको छ । सभासद्हरूले दुई सय ८५ रुपैयाँदेखि करिब पाँच लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च लिएका छन् ।
उपचार खर्च लिनेमा संविधानसभा उपाध्यक्षदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसमेत छन् । संविधानसभा सचिवालय स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको खर्च विवरणअनुसार संविधानसभा सुरु भएदेखि गत जेठसम्मको तीन वर्षमा सभासद्हरूले औषधि उपचार खर्चका रूपमा ४० लाख ८८ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ लगेका छन् । जेठयता पनि केही सभासद्ले एक/डेढ लाखका दरले पैसा लिएका छन् । 'जेठयताको तीन महिनामा माननीयहरूले बुझेको उपचार खर्चसमेत जोड्दा करिब-करिब ५० लाख पुग्छ,' सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ छन् भने कपिलवस्तुकी माओवादी सभासद् शान्तीदेवी चमारले सबैभन्दा थोरै उपचार खर्च लिएकी छिन् । गुरुङले चार लाख ८१ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ र चमारले दुई सय ८५ रुपैयाँ ५० पैसा सचिवालयबाट बुझेको स्रोतले जनाएको छ । गुरुङले गत वर्ष दसैँताका गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको अप्रेसन गरेका थिए ।
कांग्रेस नेतृ सुप्रभा घिमिरे, एमाले नेताहरू नेत्रप्रसाद पन्थी र देवीलाल थापा पनि धेरै खर्च लिनेमा छन् । घिमिरेले बैंककमा उपचार गराएको भन्दै गत वर्षको ९ पुसमा तीन लाख चार हजार तीन सय ६६ बुझेकी छन् । त्यस्तै पन्थीले सातपटक गरेर एक लाख ३२ हजार नौ सय ९८ र थापाले तीनपटक गरेर एक लाख ७२ हजार तीन सय ३६ रुपैयाँ सचिवालयबाट बुझेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संविधानसभा उपाध्यक्ष पूणर्ाकुमारी सुवेदीले एकपटक दुई हजार दुई सय र माले महासचिव सिपी मैनालीले तीनपटक गरेर ८६ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ औषधि खर्च बुझेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दुईपटक गरेर २५ हजार चार सय नौ, कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधीले चारपटक गरेर २८ हजार पाँच सय नौ, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भीमप्रसाद आचार्यले आठ हजार आठ सय पाँच बुझेका छन् । एमाले नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले दुईपटक गरेर एक हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २० हजार सात सय ९४, पूर्वमन्त्रीहरू लक्ष्मणलाल कर्णले १६ हजार एक सय ७१, रामजीप्रसाद शर्माले ३० हजार तीन सय १०, माओवादी नेता भीमप्रसाद गौतमले चार हजार सात सय ६६, कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीले तीन हजार दुई सय ५०, एमाले नेता कृष्णप्रसाद सापकोटाले नौ हजार सात सय ५४ रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च बुझेको स्रोतले जनाएको छ । अहिलेका मन्त्री हेमराज तातेड पनि दुई हजार चार सय ५५ रुपैयाँ उपचार खर्च यसअघि नै बुझेका छन् ।
उपचार खर्च लिएका सभासद्हरू रामकुमारी यादव, डम्बरबहादुर खड्का, दामोदर चौधरी र गौरीशंकर खड्काको भने निधन भइसकेको छ । उनीहरूको उपचारमा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
खर्चभन्दा धेरैको बिल
सचिवालय स्रोतका अनुसार केही सभासद्ले वास्तविक खर्चभन्दा धेरैको बिल पेस गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता बिल बोर्डमा रहेका डाक्टरहरूले चेक गरेर रकम घटाउने गरेका छन् । 'डाक्टरले भनेको भन्दा धेरै औषधि किन्ने र किनेको भन्दा पनि धेरैको बिल पेस गर्ने सभासद् निक्कै छन् । बोर्डले चेक गर्दा त्यस्ता बिलहरूको आधा रकम घटेर आउँछ,' स्रोतले भन्यो ।
सभासद्हरूको औषधि उपचारको खर्चको बिल स्वीकृत गर्न संसद् सचिवालयमा तीनजना डाक्टरको बोर्ड छ । वीर अस्पतालका डा. एई अन्सारीको संयोजकत्वमा रहेको बोर्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. सेनेन्द्र उप्रेती र नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालका डा. श्याममणि अधिकारी सदस्य छन् । सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठ बोर्डका सदस्यसचिव छन् ।
कतिपय सभासद् त पेस गरेको बिलअनुसार रकम नदिएको भन्दै कर्मचारीसित झगडा पनि गर्ने गरेका छन् । 'त्यो डाक्टर को हो हाम्रो बिल घटाउने ? त्यस्तालाई बोर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्दै झोक्किने सभासद् पनि छन्,' स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौं-३ बाट चुनाव जितेका कांग्रेस सभासद् चक्रप्रसाद ठकुरीले २६ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँको बिल सचिवालयमा पेस गरेका थिए । तर, बोर्डले उनलाई १२ हजार तीन सय तीन रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गर्‍यो र उनले त्यति बुझे ।
स्रोतका अनुसार एमाले सभासद् देवीलाल थापाले तेस्रोपटक उपचार खर्च लिँदा दुई लाख ७५ हजारको बिल पेस गरेका थिए । तर, बोर्डले उनलाई एक लाख ३४ हजार एक सय ९६ रुपैयाँ मात्रै दियो । त्यस्तै, रुकुमकी माओवादी सभासद् विमला केसीले गत वैशाखमा दोस्रोपटक उपचार खर्च लिँदा ९८ हजार आठ सय ९१ रुपैयाँको बिल पेस गरेकी थिइन्, तर उनले ३६ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ मात्रै पाइन् ।
कैलालीकी फुलमतीदेवी चौधरीले २६ हजार एक सय २४ रुपैयाँको बिल सचिवालयमा पेस गरेकी थिइन् । जबकि, बोर्डले चार हजार सात सय ६० रुपैयाँको मात्रै वास्तविक औषधि भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सभासद् मालवरसिंह थापाले ०६७ सालको पुसमा एक लाख २१ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँको उपचार गरेको बिल पेस गरेका थिए । तर, उनलाई ५७ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ मात्रै दिन बोर्डले सिफारिस गर्‍यो । रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अहिले जेलमा रहेका शिवपुजन यादवले २४ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँको बिल पेस गरेका थिए । उनले १२ हजार चार सय ६१ रुपैयाँ मात्रै पाए ।
कांग्रेस नेतृ सुप्रभा घिमिरेले बैंककमा उपचार गराएको सात हजार डलर (करिब पाँच लाख रुपैयाँ) को बिल सचिवालयमा पेस गरेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार बोर्डले घटाएर तीन लाख चार हजार रुपैयाँ दिएको थियो ।
सचिवालयले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएका सभासद्हरूलाई बिलअनुसारको सम्पूर्ण खर्च उपलब्ध गराउँछ । निजी अस्पतालमा उपचार गराएका सभासद्हरूलाई भने डाक्टरको सिफारिस र उपचारको बिल हेरेर आधा खर्च दिन्छ ।